Agaasimaha Madaxtooyada oo ka soo horjeestay xil ka qaadis lagu sameeyn lahaa Taliyaha Ciidana Booliska” – XAMAR POST
Agaasimaha Madaxtooyada oo ka soo horjeestay xil ka qaadis lagu sameeyn lahaa Taliyaha Ciidana Booliska”
By Mohamed Ahmed Last updated Jul 19, 2017
Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Daahir ayaa ka hor yimid go’aan ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya la damacsanaa in xilka looga qaado mid ka mid ah Taliyaasha Ciidamada Soomaaliya.
Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in uu ka soo horjeestay warqad xilka looga qaadayo Taliyaha Ciidana Booliska Soomaaliya Geral Cabdi xakiin Daahir Saciid Saacid kadib eedeemo loo soo jeediyay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C.llahi Maxamed ayaa ku heesta General Saacid danbiyo la xariiro qaladaad uu galay Markii uu socday weerarkii Pizza House ee bishii hore waxayna arintaasi ay sababtay in la go’aamiyo in xilka looga qaado arintaasi balse waxaa ka hor istaagay Fahad Yaasiin.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in ay dhinaca Hooyada qaraabo ka yihiin General Saacid uuna ka codsaday in uu kala hadlo Madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegay in uu ku guuleestay joojinta arintaasi.
Fahad Yaasiin ayaa saameen culus ku le Madaxtooyada Soomaaliya waxaana la sheegay in uu yahay ninka iska leh Talada iyo go’aanka ugu danbeeya ee Soomaaliya waana saaxiibka kaliya ee talada ka qaato Madaxweyne Farmaajo.
Garowe:- Baarlamaanka dowlad gobaleedka Puntland oo kalsoonida kala noqday golaha wasiiradda ee Puntland.